» सेयर बजारतर्फ पर्यटन व्यवसायी, सेयर लगानीकर्ता संघबाट ज्ञान बटुल्दै !
सेयर बजारतर्फ पर्यटन व्यवसायी, सेयर लगानीकर्ता संघबाट ज्ञान बटुल्दै !
२०७८ जेष्ठ २३, आईतवार १२:१२
कार्यक्रममा ३ वटा संस्थाका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा उपस्थित सदस्यहरूलाई सेयर लगानिकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्याल र उपाध्यक्ष तारा प्रसाद फुल्लेलले नवप्रवेशी लगानिकर्ताले विशेष गरी के के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ? लगानी गर्दा अपनाइने सावधानी र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
दोश्रो चरणको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा लगानिकर्ता संघका सदस्यद्वय युजन वजिमय र अमर डंगोलले सहजीकरण गरेका थिए ।